अकिता प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
अकिता प्रान्तमा त्यहाँ धेरै "पुरानो जापानी" छन्! उदाहरणका लागि, ओगा प्रायद्वीपको ग्रामीण गाउँहरूमा, पुरुषहरू नामहागे भनिने राक्षसहरूको पोशाकमा वार्षिक कार्यक्रमहरू अहंकारी बच्चाहरूलाई अझै पनि वंशानुगत रूपमा डराउँछन्। काकुनुदानमा एउटा अद्भुत समुराई निवास छोडियो। किन तपाईं अकिताको देश छेउमा पुरानो जापानको आनन्द लिनुहुन्न?
अकिता को रूपरेखा
ओगा प्रायद्वीप र "नामहाजे"
काकुनोदाते र समुराई गाउँ
चामल क्षेत्र अकिता, जापान मा एक ग्रामीण टाउनशिप संग। जापान विश्वमा शटरस्टकमा धानको नवौं ठूलो उत्पादक हो
अकिता को नक्शा
अकिता प्रान्त जापानको सागरमा तोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। जनसंख्या करीव 980,000 XNUMX०,००० मानिस छन्। यस क्षेत्रमा धान उत्पादन फस्टाइरहेको छ र विशाल धान क्षेत्र फैलिन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने "अकिताकोमाची" नामको चामल धेरै स्वादिष्ट हुन्छ।
अकिता प्रान्तको पूर्वी भागमा, ओउ पर्वतहरू उत्तरदेखि दक्षिणमा पर्छ। अकिता मैदान र नोशिरो मैदान जस्ता मैदानहरू बाहेक, त्यहाँ ओडेट बेसिन र योकोटे बेसिन जस्ता बेसिनहरू छन्।
अकिता प्रान्तमा मौसम र मौसम
अकिता प्रान्त जापानको सागरमा तोहोकु क्षेत्रको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। जाडोमा, चिसो हावा जापानको सागरबाट आउँदछ, अन्तर्देशीय पहाड श्रृंखला र हिउँमा हिर्काउँदछ। जाडोमा, बादल दिन जारी रहन्छ। त्यहाँ भित्री क्षेत्रमा धेरै भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू छन्। गर्मीमा, "फर्न घटना" जुन अपेक्षाकृत तातो हावा अन्तर्देशीय पहाड श्रृंखलाबाट आउँछ। त्यस समयमा दिनको अधिकतम तापक्रम 35 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ।
त्यहाँ अकिता प्रान्तमा दुईवटा एयरपोर्टहरू छन्। मुख्य एयरपोर्ट अकिता एयरपोर्ट हो। यस एयरपोर्टमा, नियमित उडानहरू टोकियो, ओसाका, नागोया र सप्पोरोको बीचमा सञ्चालन हुन्छन्। यो एयरपोर्टबाट यस अकिता स्टेशनको लागि बसबाट करीव 35 XNUMX मिनेट छ। अकिता प्रान्तको उत्तरी भागमा ओडेट-नोशिरो एयरपोर्ट छ। यो एयरपोर्ट सानो छ, तर टोक्यो उडानहरू सञ्चालनमा छन्।
अकिता प्रान्त टोक्योमा शिन्कानसेन नेटवर्कले जडित छ। अकिता प्रान्तमा अकिता, ओमगरी, काकुुनोडा र ताजावाको स्टेशनहरू छन्। आवश्यक समय प्रत्येक ट्रेनमा निर्भर गर्दछ, तर यो टोकियो स्टेशनबाट अकिता स्टेशन सम्म4घण्टाको हुन्छ।
न्युडोसाकी ओगा प्रायद्वीप, अकिता प्रान्त, जापान = शटरस्टक
अकिता शहरको उत्तरपश्चिममा ओगा प्रायद्वीप "नामहागे" को लागि प्रसिद्ध छ। यो एक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो हरेक वर्ष जाडोमा आयोजित। पुरुषहरू डेमनको पोशाकमा छन् र गाउँका घरहरू हेर्न जान्छन्। तिनीहरूले अर्को वाक्यांश ठूलो स्वरले दोहोर्याउँछन्।
"त्यहाँ कुनै crybabies आसपास छन्?"
"के आसपास शरारती बच्चाहरू छन्?"
जब नामहागेज घर आउँदछन्, बच्चाहरू धेरै डराउँदछन्। यो डरको अनुभवले, बच्चाहरूले महसुस गर्छन् कि उनीहरूले कहिल्यै नराम्रो काम गर्नु हुँदैन।
ओगा शिन्जान फोकलोर संग्रहालय
जापानको अकिता प्रान्तको ओगा शहरमा नामागेज पोशाकका साथ विदेशी पर्यटक। नामहाजे परम्परागत जापानी लोक कथामा विशाल राक्षसको नाम हो र अकिता = शटरस्टकको प्रतीक बन्छन्
ओगा शिन्जान फोकलोर संग्रहालय ओगा प्रायद्वीपको शिन्जान जिल्लामा अवस्थित छ। यहाँ १०० भन्दा बढी अप्सराहरू प्रदर्शित छन्। यस संग्रहालयको छेउमा, नामहागे संग्रहालय छ जुन ओगा क्षेत्रको विशिष्ट एल आकारको परम्परागत फार्महाउस (मगरिया) जस्तो देखिन्छ।
तपाईं यी संग्रहालयहरूमा नामहाजेको प्रदर्शन देख्न सक्नुहुन्छ। थपको रूपमा, तपाईं पनि नामहागेजमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ जुन माथिको तस्वीरमा देखिएको छ!
>> Namahage को विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
ओगा प्रायद्वीप जेआर अकिता स्टेशनबाट लगभग 40० मिनेटको दूरीमा र अकिता एयरपोर्टबाट कारबाट १ घण्टाको दूरीमा छ। अकिता शहरबाट ओगा प्रायद्वीपको वरपर बस यात्राहरू छन्।
जापानको सागर यो प्रायद्वीपको चट्टानबाट देखिएको कुनै न कुनै छ। पहिले, म Namahage बारे मा कभर छ। त्यस समय, स्थानीय मानिसहरूले भनेका थिए कि "धेरै समय अगाडि जापानको सागरबाट बच्चाहरूलाई अपहरण गर्ने नराम्रो समूह आएको हुन सक्छ।" मैले यस प्रायद्वीपमा डरलाग्दो जीवनलाई Namahage को प्रथाको पृष्ठभूमिको रूपमा महसुस गरे।
>> ओगा प्रायद्वीपमा विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
वसन्त Samतुमा समुराई हाउस, काकुनुडेट, अकिता प्रान्त, जापान = शटरस्टक
जापानी समुराई परम्पराको पुरानो कवच समुराई घर, काकुनुडेट, अकिता प्रान्त, जापान = शटरस्टक
अकिता प्रान्तमा काकुनुडेट, शरद leavesतुको पात = शटरस्टक
काकुनुडेट समुराई गाउँ, समुराई वास्तुकला र आवासको एक उत्कृष्ट उदाहरणहरू, अकिता प्रान्त, जापान = शटरस्टक
काकुनुदान अकिता प्रान्तको अन्तर्देशीय छेउमा रहेको पुरानो शहर हो। यहाँ, टोकुगावा शोगुनेटको युगमा समुराईको आवासीय शहर सुरक्षित छ। यदि तपाईं यहाँ हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं समुराई युग को वातावरण को आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ एउटा वर्ग जहाँ समुराई बस्ने र सेक्शनका बीच शहर छ जहाँ शहरहरू बस्थे। यो वर्ग स्थापना गरियो ताकि शहरका सडकहरूमा आगो लाग्यो भने पनि सामराईको शहरमा आगो पुग्न सकिन। चेरी फूलहरू यहाँ र त्यहाँ अप्रिलको आखिरमा समुराई शहरमा फल्ने छन्।
जाडोमा काकुनोदेटमा धेरै हिउँ पर्छ। यदि तपाईं जाडोमा काकुनोडेटमा जानुभयो भने, तपाईं माथिको चित्रमा देखिने सुन्दर हिउँ दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ काकिनोडेटमा एक शिन्कानसेन स्टेशन छ। टोकियो स्टेशन बाट काकुुनोदा स्टेशनको सब भन्दा द्रुत मार्ग लगभग hours घण्टा १3मिनेट छ। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा शिंकन्सेनले काकुनुडेट स्टेशनबाट अकिता स्टेशनसम्म पु। याएको छ।
पुरातन क्योटोको स्वाद भएका शहरहरूलाई "सानो क्योटो （小 京都）" भनिन्छ। जापानमा "सानो क्योटो" भनेर चिनिने धेरै शहरहरू छन्। मेरो मनपर्ने "सानो क्योटो" मध्ये एक अकिता प्रान्तमा काकुनोडेट हो। समुराई निवासहरू यो परम्परागत शहरमा छोडियो। निम्नका लागि निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्:
काकिनुडाटे, अकिता प्रान्तमा त्यहाँ केहि राम्रा समुराई आवासहरू अझै छन्। यी समुराई निवासहरूको दृश्यहरू beautifulतुहरू परिवर्तनसँगै राम्ररी परिवर्तन हुन्छन्। यस पृष्ठमा, म वसन्त र गर्मी को दृश्य परिचय गर्न चाहन्छु। सामग्रीको तालिका वसन्त र ग्रीष्म Kakतुमा काकुनोडेटको फोटोहरू काकूनोडाटेको ...
काकिनुडाटे, अकिता प्रान्तमा त्यहाँ केहि राम्रा समुराई आवासहरू अझै छन्। विशेष गरी शरद inतुमा, तपाईं यी समुराई निवासहरूमा अद्भुत शरद colorsतु रंगहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म शरद Kakतुमा काकूनोडाटेको परिचय दिन गइरहेको छु। सामग्रीको तालिका शरद Kakतुमा काकुनोदातेका फोटोहरू काकुनोडाटेको फोटो काकुनोडाटे ...
काकिनुडाटे, अकिता प्रान्तको समुराई निवास स्थान जाडोमा हिउँमा दफन गरिन्छ। यो शान्त, सेतो संसारको माध्यमबाट हिँड्दा, तपाईलाई समुराईको समयमा फर्केर आएको जस्तो लाग्नेछ। यहाँ, म जाडोमा काकुनोदेटको परिचय दिन चाहन्छु। सामग्रीको तालिका जाडोचित्र नक्शामा काकुनुडेटको फोटोहरू ...
>> काकुनोडेटको बारेमा जानकारीको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
अकिता प्रिफेक्चर = शटरस्टकमा न्युटो ओन्सेन
जाडो: योकोटे हिउँ महोत्सव
अकिता प्रान्तमा, धेरै परम्परागत चाडहरू विरासतमा प्राप्त गरियो। ती मध्ये, म विशेष गरी "योकोटे हिउँ महोत्सव" सिफारिश गर्दछ हरेक वर्ष फेब्रुअरी मा योकोटे शहर मा आयोजित।
योकोटे स्नो फेस्टिवलको बारेमा मैले निम्न लेखहरूमा परिचय दिएँ। कृपया यस लेखमा पनि छोड्नुहोस्।
जापानमा, हिउँद जाडोमा पर्दा, केटाकेटीहरू हिउँ डोमहरू बनाउँछन् र खेल गर्छन्। हिउँको गुम्बजलाई "कामकुरा" भनिन्छ। जब म बच्चा थिएँ, म कामकुरामा मेरा साथीहरूसँग खेल्थें। हालसालै, हुनशु टापुको उत्तरी भागको अकिता प्रान्तमा, धेरै ठूला र साना कामकुराहरू यसमा बनेका छन् ...
रातो अकिता inu कुकुर हिममा = शटरस्टकमा खेल्दै
के तपाई अकिता कुकुर (अकिता इनू) लाई चिन्नुहुन्छ?
अकिता कुकुर ठूलो कुकुर हो जसलाई शिकार कुकुरको रूपमा अकिता प्रान्तको पूर्वी भागमा रहेको पहाड श्रृंखलामा राखिएको छ। तिनीहरू आफ्ना मालिकप्रति वफादार हुन्छन्। अकिता प्रान्तमा ओडेट शहरमा थुप्रै सुविधाहरू छन् जहाँ तपाईं अकिता कुकुरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। विवरणको लागि, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् यो साइट.
जापानमा, "Hachi" नामको अकिता कुकुर प्रख्यात छ। उनको जन्म १ 1923 २ in मा भएको थियो र उनी टोकियोमा विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले राखेका थिए। प्राध्यापक अचानक मरे। तर हाची दश बर्षदेखि प्रोफेसरको शिबुया स्टेशनमा फर्किने प्रतीक्षा गर्दै थिए जुन प्रोफेसरले बारम्बार प्रयोग गर्दथ्यो। तपाई यो कुकुरको मूर्ति शिबुया, टोकियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। Hachi को बारेमा एक फिल्म पनि उत्पादन भएको थियो।